LG waxay sugi doontaa xoogaa si ay u soo saarto taleefankeeda isku laabma | Androidsis
MWC 2019 ee dhacaya dhamaadka bisha ayaa yeelan doonta 5G iyo taleefannada casriga ah ee laabma oo ah laba ka mid ah sheekooyinkeeda ugu waaweyn. Noocyo badan ayaa la joogi doona munaasabadda iyaga oo qaarkood la jira. Shirkadda Huawei ayaa halkaas ku soo bandhigi doonta taleefannadeeda casriga ah ee isku laaban, inkasta oo sida xaqiiqada ah aysan kaligeed noqon doonin. LG waa nooc kale oo ka mid ah astaamaha munaasabadda, oo la filayo inuu la yimaado qaabkan, in kasta oo ay u muuqato inaysan dhici doonin.
Waxaa la isla qaatay in taleefannadan casriga ah ee LG ay aadeyso imow bilowga sanadka. Waxaa la ogaa bilo in astaanta Kuuriya Waxaan bilaabay inaan shaqeeyo telefoonka noocaas ah. Laakiin imaatinkiisa suuqa waa inaan sugnaa inbadan fikir ka badan. Maaddaama shirkaddu aysan ku degdegin arrintan.
Sidaad horeyba u ogayd, waxaa jira noocyo badan oo qorsheeyey soo bandhigida taleefan casri ah oo la laaban karo sanadkaan oo dhan. Waxaan horey u haysanay la soo ururiyey waagii hore liiska noocyada. LG wuxuu ka mid ahaa, in kasta oo shirkadda Kuuriyada ahi aysan ku talo jirin inay xilligan bilowdo. Waxay doorbidaan inay sugaan oo ay arkaan sida inta kale ee magacyadu ku sameeyaan arrintan.
Waxay tixgelinayaan taas dalabka qaybtan suuqdu aad uma sarreeyo hadda. Sidaa darteed, waxay doorbidaan inay sugaan in muddo ah qaybtan suuqaa inay xoogaa horumar gaarto. Intaas waxaa sii dheer, shirkaddu waxay sheegtay in kastoo aan la joojin mashruuca, iyo soo saarista qalabkan, haddana aysan ahayn mudnaan xilligan. Sida ay yiraahdeen, baahida hadda jirta waxay noqoneysaa hal milyan oo unug oo suuqan ah oo loogu talagay taleefannada casriga ah.
Sidaa darteed, waxay ballanqaadaysaa inay ahaato qayb suuq yar oo dhexdhexaad ah weli ah. Markaa joogitaankeeda ma aha wax hadda muhiim u noqon doona LG. Marka hadda waa inaan sugnaa in yar. Uma muuqato in taleefankan casriga ah ee isku laaban la bilaabi doono sanadka 2019 ee dukaamada. Xaqiiqdii sanadka soo socda ayaa rasmi noqon doona. Dhanka kale, LG waxay rabtaa inay diirada saarto dhinacyada kale. Waxay leeyihiin taxane kale oo dhinacyo ah oo ahmiyad weyn u leh xilliyadaan oo kale.
Iskusoo wada duuboo inaad soo ceshato booskaaga suuqa waa mudnaan shirkadda Korea. Muddo dheer ayay natiijooyin xun ku lahaayeen arimahan taleefanka, taasi waxay kudareysaa khasaaro millionaire ah. Iyada oo ay taasi jirto, LG waxay sii wadaa soo saarista taleefannada casriga ee suuqa. Shirkaddu waxay aaminsan tahay in weli ay jirto baaxad ay dib ugu soo ceshan karto ku-xirnaantideeda qaybtan maanta. Sidaa darteed, way na sugayaan warka qaybtaada MWC.
Shirkadda rajeynayaa in 5G ay noqon doonto wax iyaga caawiya dib ugu soo noqoshada suuqa sare ee Android. Xilligan, sida noocyada kale sida Samsung, shirkaddu waxay cusbooneysiineysaa noocyadeeda. Intaas waxaa sii dheer ka shaqeynta dhammaan noocyada cusub. Sidaa darteed waxay rajeynayaan in tani ay siin doonto natiijooyinka la filayo oo sidaas ay ku soo ceshadaan booskoodii suuqa. Gaar ahaan ka dib tiradii xun ee iibka ee ay haysteen sanadkii hore.
LG iyo Sony waa laba tusaale oo wanaagsan oo noocyada ah lumiyay joogitaankooda suuqa. Labaduba waxay raadinayaan inay ku tiirsanaadaan hal-abuurnimo cusub iyo horumarka 5G ee Android si ay u helaan qayb ka mid ah dhulkii ay lumiyeen sannadahan. In kasta oo tartanka ka imanaya noocyada Shiinaha maanta aad u weyn yahay. Taas oo howshan ka dhigaysa mid labadeenna ku adag. Laakiin xilligan midkoodna kama tanaasulayo inuu soo saaro taleefannada casriga ah ee suuqa, waa wax muhiim u ah arrintan.
Sidaa darteed, marka laga hadlayo LG, nooca Kuuriya ayaa sameyn doona sug inaad aragto natiijooyinka tartamayaashaada suuqa ayey ku hayaan taleefannadooda gacanta oo isku laaban. Iyada oo taa laga duulayo, waxay arki doonaan goorta ay suuqa ku soo bandhigi doonaan taleefannadooda casriga ah. Iyagu ma degdegaan xilligan, maxaa yeelay waxay og yihiin inay leeyihiin mudnaano kale hadda. Xusuusnow, Febraayo 24 waxaan ballan la leenahay LG oo soo bandhigi doona wararka MWC 2019 ee Barcelona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LG ma soo saari doonto taleefan casri ah oo isku laaban xilligan